Quraacda caanka ah ee Ingriiska | Wax walba oo ku saabsan dhaqankan caloosha ku jira | Safarka Absolut
Quraac Ingiriis ah
Quraacda caadiga ah ee Ingiriisiga ah waa hay'ad qaran. Inta badan dadka ku nool Boqortooyada Midowday waxay ku raaxaystaan ​​quraacda waxa ay tahay, cuntada ugu muhiimsan ee maalinta, mana aha wax dhib ah in ay goor hore soo kacaan si ay ugu raaxeysan karaan si dhameystiran oo deggan.
Habka ugu dhaqameed ee Quraac Ingiriis ah waxaa loo yaqaan "quraac buuxdaKaas oo helaya magacyo kala duwan. Tani waxay kuxirantahay deegaanka aan joogno iyo waxa aan cuni doono quraacda.
1 Taariikhda quraacda Ingiriisiga
2 Waa maxay quraacda Ingiriisiga “buuxa” ee caanka ah?
3 Maxay yihiin ikhtiyaarrada quraacda ee Ingiriisiga ah ee jira
4 Magacyada kale ee quraac dhaqameedka ingiriisiga ah
5 Cunnooyinka Quraacda ee Ingiriisiga Muhiimka ah
Taariikhda quraacda Ingiriisiga
In si fiican loo ogaado dhaqanka ee Quraac Ingiriis ah waa inaan ku noqonaa qarniyadii dhexe. Waqtigaas taariikhda, guud ahaan waxaa jiray laba jeer oo keliya maalintii: quraac iyo casho. Quraacdu waxay ka koobnayd ale iyo rooti iyo marmar farmaajo ama hilib qabow.
Waxyaabaha muhiimka ah ee ku saabsan quraacda Ingiriisiga sidoo kale waa inay badanaa u adeegi jireen dadka sharafta leh xilliyada bulshada ama xafladaha sida aroosyada. Markii hore, aroosyadu waxay ahaayeen inay dhacaan duhurka ka hor, sidaa darteed Cunnadii ugu horreysay ee lammaanaha ay wadaagaan sida nin iyo naagtuba waxay ahayd quraac, helitaanka magaca "arooska quraacda".
Ukunta iyo hilib doofaar marka hore u muuqday qayb ka mid ah quraacda Ingiriisiga at horraantii qarnigii XNUMX-aad, sidoo kale ku darida noocyo kale oo cunsur ah sida kilyaha, sausages ama suxuunta lagu kariyo dhir udgoon ee Hindida ah ee bariiska, kalluunka la cabbo iyo ukunta la kariyey.
Ahmiyada ugu weyn ee Quraac Ingiriis ah waxay ka timid Kacaankii Warshadaha, taas oo saacado badan oo shaqo jir ah iyo ka shaqeynta warshadaha, ay ubaahanyihiin cunno wanaagsan subaxa hore.
Waxaa jira dad badan oo aan ku arkin quraacda Ingiriisiga indho "caafimaad qaba", laakiin waxaa jira khabiiro qaar oo ku doodaya in cunnooyinka la midka ah kan ka kooban quraac af ingiriis ah oo buuxa, waxay maamushaa kordhinta dheef-shiid kiimikaadka, gaar ahaan haddii aan ka samaysanno dhammaan waxyaabaha ay ka kooban tahay saliid la'aan, laakiin foornada ama lagu dubay.
Waa inaan maskaxda ku haynaa taas, qaybaha ay leedahay Quraac Ingiriis ah, waxaan ka heli karnaa meelo ay ku jiraan cuntadooda, quraacdu si buuxda ayaa loo heli karaa maalintii oo dhan. Waa cunto aan ku raaxeysan karno waqti kasta oo maalin ah, oo gacan ka geysata caan ku ahaanshihiisa.
Quraac af soomaali dhaqameed ah Waa wax caadi ah oo isugu jira cuntooyin aad loo bogaadiyo oo ay raacaan dad badan iyo in badan oo adduunka ah, taas oo u oggolaanaysa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee jiilalka cusub, oo ah quraacda, in lagula tacaalo iyadoo la samaynayo quraac ay ka buuxdo cunto soo jiito isha iyo sidoo kale urta iyo dhareerka.
Annaga oo tixgelinayna kharashka tamarta ee aan bixinno maalintii oo dhan, waa in aan dhigno ama ka saarno walxaha quraacdeena ingiriiska ee soo jireenka ah. Shaqada quraacda wanaagsan waa inay soo kiciso dheef-shiid kiimikaadkeena iyo, annaga, annaga, inaynaan ku buux dhaafin kalooriyada jahwareerisa jirkeena oo ay ku sii jirto keydinta dhibaatooyinka mustaqbalka keenaya.
Waa maxay quraacda Ingiriisiga “buuxa” ee caanka ah?
Guud ahaan Boqortooyada Ingiriiska iyo Ireland, quraacda "buuxa" ee Ingiriisiga ah waxay ku dhowdahay inay caan ka tahay biirka ama cunnooyinka kale ee aan ku raaxeysan karno. Waxaa jira dad aan ka helin maalin kasta, laakiin doorbida inay keydiyaan maalmaha fasaxa ah iyo fasaxyada ama booqashooyinka ay la leeyihiin ehelka iyo asxaabta.
Ereyga buuxa ee la socda quraacda Ingiriisiga runti wuxuu ka yimid xaqiiqda ah in quraacdu ay ka buuxdo cunto kala duwan taas oo ka dhigaysa a quraac ku habboon. Quraacda oo buuxda ayaa la siiyaa, sida aan ka filan karno quraacda, subaxda ka hor inta aan aadin shaqada ama iskuulka, oo waqti badan aan ku raaxaysanno.
Waxyaabaha u gaarka ah waxay ka dhigeysaa cunto lagu raaxeysan karo maalintii oo dhan badiyaa qaddarkana lagu beddelo. Marar dhif ah ayaa la cunaa maalin kasta ee usbuuca, laakiin waxay sameysaa isku-dar ah cunsurradeeda si aan ugu raaxeysan karno maalin kasta, xitaa haddii aaney gebi ahaanba ahayn.
Maxay yihiin ikhtiyaarrada quraacda ee Ingiriisiga ah ee jira
Sidee cunno kasta oo aan u sameyn karno maalin, dookhyadayada iyo dhadhankeenna, ay si weyn saameyn ugu yeeshaan marka aan go'aan ka gaareyno waxa aan yeelan doonno quraacda iyo waxa aan dhigeyno ama ka qaadan doonno wixii la yaqaan "quraac af soomaali dhaqameed ah”. Muhiimadda iyo caannimada quraacdani waxay ku saleysan tahay isku-dhafkeeda badan iyada oo aan luminaynin tayadiisa ama ujeeddadeedaba: in ay na siiso dhammaan tamarta lagama maarmaanka u ah bilaabidda maalinta.
Quraacdu waxay kubilaaban kartaa casiir liin dhanaan ah, siiriyaal, ama miro daray ah, laakiin the wadnaha quraacda dhameystiran weligiis ahaan doonaa hilib doofaar iyo ukumo (gaar ahaan walaaq)) kaas oo ay weheliyaan sausages, yaanyo duban, boqoshaada, shaaha, rootiga iyo macaanka.
Waddan kasta oo ka mid ah Boqortooyada Ingiriiska wuxuu leeyahay xulasho u gaar ah oo wehel ah, taas oo dadka siisa noocyo kala duwan oo quraac dhaqameed ah oo doonaya inay noqdaan isha ugu weyn ee tamarta maalintii oo dhan.
Waxay kuxirantahay qadarka aan ka rabno saxankeena iyo waxyaabaha aan doorbidno, waxaan ka heli karnaa xulashooyinka soo socda:
Kuwa la yaqaan quraac af ingiriis ah oo buuxa waxaad haysataa ikhtiyaarka isbarashada huud madow (sausage dhiig ayaa loo googooyaa xoogaa qaro weyn oo la shiilay si uusan u luminin nuxurka iyo dhadhanka), digir la dubay iyo rootiga la shiilay, ahaanshaha isku-darka guuleysta haddii aan ku darno qaybta qaro weyn ee quraacda Ingiriisiga dhaqameed: ukunta, hilib doofaar, bolse, iwm
Quraacda buuxda ee aagga Scottish-ka, waxay leedahay maaddooyinka quraacda Ingiriisiga oo buuxa laakiin sidoo kale waa lagu darayaa Scones baradho, Scottish Haggis iyo roodhida.
Aagga Irishka, quraacda buuxda waxay leedahay aasaaska adoo ku daraya rootiga soodhaha leh.
Haddii aan rabno quraac dhaqameed Ingiriis ah aagga Welsh, waxaan ka heli doonnaa rooti iyo keeg ka samaysan caleenta badda oo lagu kariyey miro.
Waxaa jira caan ku ah "Ulster shiil”, Kama duwana quraacda af-ingiriisiga ee caadiga ah, laakiin ku dar rootiga soodhaha ah meel kasta oo dalka ka mid ah oo u adeegaya maalinta oo dhan qofkii doonaya inuu ku raaxaysto.
Magacyada kale ee quraac dhaqameedka ingiriisiga ah
In kasta oo adduunka lagu yaqaan oo loogu riyaaqay sida "quraac af soomaali buuxa ahHoteellada iyo makhaayadaha iyo, sidoo kale, guryaha kala duwan ee ragga iyo dumarka Ingiriisiga ah, waxaa fahamsan dadka kale ee ku nool Boqortooyada Ingiriiska ereyada kale ee laga isticmaalo waddanka oo dhan. Erayadaas waxaa ka mid ah: Fry Up (waxaa loo isticmaali jiray in lagu qeexo weel ay ku jiraan waxyaabo badan oo la shiilay), Monty buuxa, iyo Ireland, waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "Qub”, Micnaha la mid ah Isku shiil, laakiin kaliya laga isticmaalo gudaha aagga Irishka.
Koob shaah ah ayaa lagu daraa quraacda oo dhan, maadaama ay tahay cabitaan aad looga jecel yahay dalka Ingiriiska isla markaana dhaqan u ah quraacda, sidoo kale qaxwaha.
Cunnooyinka Quraacda ee Ingiriisiga Muhiimka ah
Sida iska cad wax walba maahan cuntada ku jirta quraacda af-ingiriisiga ee caadiga ah, sidoo kale waa inaan tixgelin siino waa inaan ku darnaa suugada aan la soconno quraacdeena cajiibka ah. Kuwaas suugada Waxay noqon karaan suugo yaanyo dabiici ah ama ketchup, macaanka dhadhanka aan aad u jecel nahay, labadaba rootikeena iyo waxkasta oo aan dooneyno inaan la socono.
Waxaan sidoo kale ku dari karnaa kuwa caanka ah Suugada Ingiriisiga Marmite: baastadan laga sameeyay khamiirka biirka, taas oo ku habboon in lala socdo quraacdeena af-Ingiriisiga ee caadiga ah lehna dhadhanka caadiga ah ee aaggan iyo biirkiisa.
Ingiriisku aad ayuu u ixtiraamaa arrinta cuntada, maadaama aad arki doonto inaad leedahay a noole adag ama aad loo isticmaalay ilaa durdurradaas cuntada subaxdii, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa haddii aad u safarto London waa inay isku dayaan inay ku raaxaystaan ​​dhadhankeeda. Ikhtiyaar wanaagsan oo lagu raaxeysto safar wacan oo London ah ayaa ah kireynta mid ka mid ah kuwa badan guryaha ku yaal london waxaa laga heli karaa internetka oo quraac Ingiriisi ah ka samee baar ama makhaayad, maadaama badanaa loo diyaariyo si hufan oo ay badanaa macaan tahay meel kasta.
Maanta, nolol aad u fara badan, nolol caadi ah iyo waajibaad joogto ah, Ingriiska waxaa ku dhacay isbadal ku yimid caadooyinkooda, ka hor inta aysan caado u aheyn quraacda sidan oo kale maalin kasta, ama ugu yaraan inta badan, laakiin maanta, qeyb weyn oo ka mid ah magaalada Londoner ayaa ku qanacsan leh a quraac fudud, ku saleysan badarka, tours, taas oo lagu degdego ka hor shaqada. Nasiib wanaag, haddii aad dagi doontid hudheel, waad isku dayi kartaa dhibaato la'aan, maadaama ku dhowaad dhammaantood ay ku darayaan qiimayaashooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Quraac Ingiriis ah
Waxyaabahan oo dhan maaddaama aysan cidna wax wada cuni karin cm tan ... sidoo kale ma cuni kartid digirta quraacda
Waxaa loo qoray öcasiones¨.
Aad ugu eg midka aan quraac ku wada cunnay ee Mexico
Nabade Alicia !!! Ma haysaa cuntada sida loo diyaariyo digirtaas?
Ku jawaab Graciela
yaa og dijo
Maxaa quraac qariib ah biaaaaaaaaaaaaaa
Jawaab yaa og
Waa wax aad u wanaagsan !!! Waxaan ku cunay London markii aan daawanayay. Waxa aan u baahanahay ayaa ah qaabka loo diyaariyo digirtaas !!! Fadlan caruurtaydu way jeclaan doonaan !!!
Waxaan u sii diyaarin doonaa quraac fudud kooxdayda teknolojiyadda
waxaan jeclahay babaayga
Ku jawaab pepetete
Cunnooyinka caadiga ah ee gobolka Amazon
Dharka caadiga ah ee reer Kolombiya